Google Inopedza Drone Program, Ndiyo Iro Rumor - ITS Tech School
Imwe yezvirongwa zveGoogle-drone-based hazvirevizve, asi sangano rekutsvaga kweInternet kuburikidza ne unmanned ethereal framework ndiyo nzira yakareba kubva pakuitwa.
Tsamba yakagadzirirwa s X sangano sekupedzisira yakapedza Titan yayo inowedzera, iyo yaive ichibata zuva rakagadziriswa drone iro rinogona kutumira Indaneti kufambira munzvimbo dziri kure dzenyika.
X, nguva dzose inotsanangurwa se "Moonshot Factory," yakasimbisa kuti boka reTutan rakanga rave rakaputsika pasina nguva mushure mekunge boka rakabatana X negore rakapfuura, 9to5Google yakashuma.
Bato re50-vanhu richaenda kune mabasa akasiyana mukati megadziro uye hutungamiri hunoenda mune imwe sangano yezvekutengesa kweIndaneti iyo inowedzera mari yakawanda, maererano ne9to5Google.
Pedyo ne drone-kutengesa kuwedzera Wing, X's venture Loon inoramba ichitsvaga mudenga-based Internet kutumira.
Yakasiyana neTitan, iyo yakatarisira ndege yakagadziriswa inorondedzera, iwedzere Loon yakavakirwa pahurongwa hwezvinyorwa zvakawanda zveplatable dzinobhururuka dzichibhururuka mu stratosphere of Earth.
I-inflatables inotarisa zuva rakagadziriswa purogiramu yekugadzirisa magadziri anowana zviratidzo zveLTE kubva kumasangano chaiwo pamusoro penyika, iyo inobva yaendeswa kune zvakasiyana-siyana zveplatables, zvichiita urongwa hwakawedzerwa hwekuwanika munzvimbo dzenyika pasina Internet.
Kuwedzera Chigoni chave kuchigadzirwa kubvira 2013 uye zvino chinogona kutumira chimwe chinhu chinokonzerwa nehutachiona muhurongwa hwayo nguva dzose.
Rwendo rurefu kubva kune mumwe munhu inflatable raiva zuva re190, rakachengetedza kupfuura mamiriyoni 75,000 kutiza uye rakayambuka 19 nyika dzakasiyana, sezvakaratidzwa ne X.
Ichi chitsva cheGmail chinyengeri chekunyengedza chiri kunyengedza kunyange vateresi vane ruzivo: Heino chakavanzika chekuzviziva